အားကျ အတုယူစရာကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီး (၁၀)ဦး
HomeGeneral Knowledgeအားကျ အတုယူစရာကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီး (၁၀)ဦး
တအားချမ်းသာတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လို့ သင်တွေးလိုက်တဲ့အခါ သင့်စိတ်မှာ ဘယ်ပုံရိပ်တွေကို မြင်ပါသလဲ? ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး မင်းသမီးတစ်ဦးလား? ထိပ်တန်းမော်ဒယ်တစ်ယောက်လား? ဒါမှမဟုတ် အလွန် အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ရဲ့ ဇနီးလား? ယခင်က အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် သူဌေးသမီး၊ သူဌေးကတော်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဦးဆောင်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်လာဖို့က မလွယ်ကူပါဘူး။ အရည်အချင်းတွေ ပြည့်စုံဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ Gender ခွဲခြားမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံတော်တော်များများက စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးတွေမှာ ဦးဆောင်ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးများစွာ ရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ငွေအရင်းအနှီးတွေကို ဘယ်လိုတိုးတတ်အောင် ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ကျိန်းသေသိတဲ့ ဒီအချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီး(၁၀)ဦးအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများကို ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် (ကမ္ဘာပေါ်က ဈေးအကြီးဆုံး အစားအစာများ)
၁။ Sheikha Mozah , ကာတာ
အသက် – ၅၈
Net Worth: ဒေါ်လာ 10သန်း
ဒီအမျိုးသမီးကတော့ ကာတာနိုင်ငံ စော်ဘွားရဲ့ဒုတိယဇနီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သားသမီး၇ယောက်မိခင်ဖြစ်ပါတယ်။ sheikha Mozah သည် လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေး တတ်ကြွလှုပ်ရှားသူ မဟုတ်ပေမယ့် သူမတိုင်းပြည်မှာ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ တိုးတတ်မှုကို ထောက်ပံ့နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါရဂူဘွဲ့များ များပြားစွာ ရရှိခဲ့ပြီး “ကမ္ဘာ့စတိုင်အရှိဆုံး ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီး” အဖြစ် မဲပေးခံခဲ့ရပါတယ်။
၂။Ivanka Trump, USA
အသက် – ၃၅
Net Worth: ဒေါ်လာသန်း ၇၄၀
ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ သမီးကြီးတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း အပူအပင်ကင်းတဲ့ ဘ၀တစ်ခုမှာ နေထိုင်ဖို့ သူမဖခင်ရဲ့ပိုက်ဆံများကို ထိုင်သုံးနိုင်ပေမယ့် သူမကိုယ်တိုင် အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်လာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မကြခဏတီဗီတွေမှာ ပေါ်ထွက်လာတတ်ပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်မှာလည်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သူမမှာ အလုပ်အချိန်တွေနဲ့ ကျပ်တည်းလှသော်လည်း သူမအတွက်နှင့် သူမမိသားစုအတွက် အချိန်အမြဲတမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။
၃။ Pansy Ho, တရုတ်
အသက် – ၅၄
Pansy Ho သည် လောင်းကစား၏ ဘုရင်လို့သိကြတဲ့ နာမည်ကြီး ဘီလျံနာ Stanley Ho ရဲ့ သမီးဖြစ်ပါတယ်။ Pansy သည် Hoမိသားစုရဲ့ သားသမီး 17ယောက်ထဲက အချမ်းသာဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဆိုလျှင် သူမရဲ့ဖခင်ထက် ပိုက်ဆံပိုရှိတာကြောင့် သူမဖခင်က သမီးအတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူရပါတယ်။
၄။ Margarita Louis-Dreyfus, ပြင်သစ်
အသက် – ၅၅
ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး- ဒေါ်လာ၅.၃ ဘီလီယံ
မာဂရီးလူးဝစ် သည် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး ရုရှား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမခင်ပွန်းသေဆုံးပြီးနောက် သူမသည် လူးဝစ် Dreyfus အုပ်စု၏ဥက္ကဌနှင့် Olympique de Marseille ဘောလုံးအသင်း၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပါတယ်။ မာဂရီးသည်နောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီး မကြာသေးမီက အမွှာသမီးမိန်းကလေးတွေကို ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။
၅။ Carrie Perrodo, စင်္ကာပူ
2006မှာ သူမခင်ပွန်း Hubert Perrodo ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက် မိသားစုစီးပွားရေး (ပုဂ္ဂလိက ရေနံကုမ္ပဏီကြီးများထဲကအကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့)ကို သူမဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ကုမ္ပဏီကို သူမသားဖြစ်သူက ဦးဆောင်နေပြိး သူမသည် ပရဟိတအလုပ်တွေကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သူမအချိန်အများစုကို သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် အသက်၆၆နှစ်ဖြစ်ပြီး သူမကိုကြည့်ရတာ အံသြစရာကောင်းပါတယ်။
၆။ Charlotte Casiraghi, မိုနာကို
အသက် – ၃၁
ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး- ဒေါ်လာ ၅.၇ ဘီလီယံ
Charlotte Casiraghi သည် မိုနာကို ရာဇပလ္လင်ရဲ့အနွယ်တော် ၈ဆက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Grace Kelly ရဲ့ မြေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမအားလပ်ချိန်တွေမှာ မြင်းစီးခြင်းနှင့် သတင်းစာဆရာအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Charlotte သည် သူမရဲ့ကျော်ကြားတဲ့ အဖွားထံမှ ကြည့်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ တော်ဝင်ဘဏ္ဍာတွေကို အမွေဆက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။
၇။ ခရစ်စဝေါ်လ်တန် , အမေရိကန်နိုင်ငံ
ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး – ဒေါ်လာ၆.၁ဘီလီယံ
Wal-Mart ကိုတည်ထောင်သူ John T.Walton ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူ မုဆိုးမ Christy Walton သည် တစ်ချိန်က ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီး၏ ခေါင်းစဉ်မှာ ထည့်သွင်းခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူမဘဏ်အကောင့်က တစ်ဖြည်းဖြည်း ဆွဲဆောင်မှု လျော့နည်းလာပေမယ့် သူမသည် အမျိုးသမီးပရဟိတလုပ်ငန်းများမှာ သြဇာအရှိဆုံးသူတစ်ယောက် ဖြစ်ဆဲပါ။
၈။ Iris Fontbona, ချီလီ
အိုင်းရစ်သည် သူမခင်ပွန်းထံမှ အမွေဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စွာ စီမံနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူမအသက်အရွယ်နဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်သေးတာက လုံးဝချီးကျူးဖို့ ကောင်းပါတယ်။
၉။ Laurene Powell Jobs, အမေရိကန်နိုင်ငံ
သူမသည် Apple Incကို တည်ထောင်သူရဲ့မုဆိုးမဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းများ အများပြည်သူရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း ရှိပါတယ်။ Apple က သူမခင်ပွန်းရဲ့ ရှယ်ယာများကို အမွေဆက်ခံရပြီးနောက် Lauren Powell jobs သည် ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်နေပြီး ကြီးမားတဲ့ ပရဟိတစီမံကိန်းရဲ့တွေကိုလည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ Susanne Klatten, ဂျာမနီ
ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုး – ဒေါ်လာ ၂၂.၅ ဘီလိယံ
သူမသည် သူမအစ်ကိုနဲ့အတူ Suasanne Klatten ဆေးဝါးကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ဦးဆောင်နေသော်လည်း သူမသည် BMW ရှယ်ယာတစ်ဝက်ကို ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ ဂျာမနီမှာ အချမ်းသာဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ် သူမစီးပွားရေးများကို အောင်မြင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနေပြီး မိသားစုနှင့်အတူ အားလပ်ချိန်များကို အသုံးချပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ချပေးနိုင်...
တူတူပုန်းတမ်းကစားရင်း အ၀တ်လျှော်စက်ထဲ ပိတ်မိနေလို့...